सिटि सफारी चलाएर अपांग श्रीमान र छोरी पाल्दै यी महान नेपाली चेली – Online Nepal
March 16, 2020 549
पहिला ठेला ठेलेरै उनले जेठी छोरीलाई इन्जिनियर पढाइन् र इन्जिनियर बनाइन् । जेठी छोरी पूजा लामा इन्जिनियरिङ बनिसकेकी छिन् कान्छी छोरी कविता लामा ब्याचलर पढिसकेकी छिन् । ठेला ठेलेरै त्यतिबेलै उनले घरजग्गा जोडिसकेको बताइन् । अहिले ६ वटा रिक्सा किनेर अन्य महिलालाई पनि उनले आत्मनिर्भर बनाउँदै आएकी छिन् ।
उनको लक्ष्य अब ग्यारेज खोलेर अझै धरानका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने छ । उनी हाल अखिल नेपाल रिक्सा चालक सङ्घकी अध्यक्ष समेत छिन् । हाम्रो कोशी अवाज बाट साभार ।
Prevफुटबल खेलाडी डाँगीको खु’कुरी प्र’हार गरी ह’त्या
Nextदोस्रो बिवाह गरेकी प्रियंकाको, बिवाह लगत्तै घ,ट्यो अचम्मको घ,टना, आयुष्मानको यो निर्णयले सबै अचम्मित (भिडियो सहित )
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (61920)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (45318)